विवाहमा साइँली औंलामा औठी किन लगाईन्छ ? यस्तो छ कारण - Aamsanchar
विवाहमा साइँली औंलामा औठी किन लगाईन्छ ? यस्तो छ कारण
आमसंचार ,कार्तिक २५, २०७६
विवाहको बेला बेहुला बेहुलीले एकआपसको साइँली औंलामा औठी लगाइ दिने चलन छ । विवाह बन्धनमा बाधिएका महिलाहरूले बायाँ हातको साइँली औंला र पुरुषहरूले भने दायाँ हातको साइँली औंलामा औठी लगाउने चलन पहिलेदेखि नै चल्दै आएको मानिन्छ ।
पहिला औठी दुलहाका पितालाई विवाहको चिन्ह स्वरुप दिने चलन थियो । अब भने औठी बेहुलालाई नै लगाइदिने गरिन्छ । केटिहरूको बायाँ हातको साइँली औंलामा र केटाहरूको दायाँ हातको साइंली औलाको नसा सिधै मुटुमा जोडिने हुँदा उक्त औलामा औंठी लगाइ दिँदा सीधा मनसँग सम्बन्ध हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको बुझिन्छ ।